Madagascar: Rahantamalala Marie Charline - Gender Links
Drivers of Change Madagascar: Rahantamalala Marie Charline...
Madagascar: Rahantamalala Marie Charline
Manaraka ny fampiofanana izay naon’ny GL TANY Mahajanga tamin’ny taona 2014 tamin’ny fanatonako fitarainana nataoko tamin’ny C.D.E.F no nahatonga izao ho lasa mpiofana tamin’ny GL betsaka ny fahaizana amam-pahalalana azo misokatra ny saina fa tena afaka manao zavatra ary tena mahavita ny vehivavy ary tana ilaina ny antopisiany vehivavy toa raha tsy manday andraikitra ny vehivavy dia tsy mandeha mihintsy eo amin’ny lafiny rehetra (oh: fampandrosoana)
Nitondra fanovana ny mpitarika ohatra nahazo fahalalana fahaizana mitantana mikajikajy ny vola miditra sy mivoaka ; mivelatra ny toe-tsaina afaka mahatsangan-javatra afaka mampianatra ny namana tamin’ny fiofanana efa azo mamoha ny olana eo amin’ny hafa (manodididna)zava-dehibe koa izao fihaonana eo ANTANANARIVO izao manova zavatra betsaka
Nampianatra ny drafitr’asa fandraharahana mampianatra lamina io drafitr’asa io ,fitanana an-tsorara ny asa fandraharahana ato fanodikodinana ato raha hanao asa fandrahorahonana iray. Tao Mahajanaga no niarahana tamin’ny GL tsy nisy lesoka.
Nandeha tsara ny fampiofanana tsy nisy ny olana ,fanohizana ny drafitr’asa fandraharahana. Nanova ny fiainana satria afak miaina toy ny olona
Ny fanarahana fanantanterahana ny fiofanana ohatra (fandalanjalanjana ny vola sy asa ato, ao antokatrano). Eny nisy anjara biriky nentiny GL ohatra: nisy fanampiana ara-bola kely. Mamporisika ny ooa nanaraka ny fanofanana hatrany. Nisy fiovana tamin’ny traikefa fahaiza-manao. Nahazo traikefa fahaizamanao asa fandaharana. Tena nisy fifandraisana eo aminy fianakaviana, ohatra: zanaka mianatra ,misakafo miarina toy ny olona. Nampahery ny zanako nonome courage azy ireo
Teo aminy manodidina satria manome asa ho an’ny olona. Tokony hiasa na hivarotra isika vehivavy fa tsy tokony ho laniana ny fotoana tokony hanaovana zavatra. Taminy alalan’ny fampiofanana noentin’ireo mpampiofana izany